FBA FCL Negungwa Kubva kuChina kuenda kuUSA
FBA LCL Negungwa Kubva kuChina kuenda kuUSA
FBA AIR Kubva kuChina kuenda kuUSA
FBA Express kubva kuChina kuenda kuUnited States
Yakakosha-yakawedzerwa Service muChina
FBA Kumhiri kwemakungwa Warehousing Kutamisirwa
FBA Inodzosera Zvinhu kuChina, Warehousing Service muChina
Mutengo Referensi Kubva kuChina kuenda kuUSA
Amazon Warehouse Referensi Mutengo
Bhatiri Zvigadzirwa LCL Mutengo Referensi
Mutengo Referensi yeSevhisi
FBA Cargoes Mashandiro Vhidhiyo
Zvipfeko Zvipfeko Chikamu
Zvipfeko, Hat Classification
ZveMagetsi Zvigadzirwa Chikamu
Kunze Chigadzirwa Chikamu
Kunze Grill Kuronga
Kunze, Sporting Goods
Fitness michina kesi
Chikamu Chemidziyo Yeimba
Kupatsanura kweCeramic Zvigadzirwa
Kupatsanura kweMabhokisi Ekuchengetedza
Kushongedza Zvishongedzo Kurongeka
Kicheni fenicha kesi
Ko yemagetsi sikuta lithium bhatiri kunze kwenyika inoda ngozi bhegi chitupa? Chii chine ngozi chitupa chebhegi?
Post nguva: Gumiguru-12-2021
Scooter yemagetsi haina kungofarirwa muChina nekuda kwezvakanaka zvacho senge saizi yechiedza, tsoka diki uye mashandiro ari nyore, asi zvakare senge yekutanga sarudzo yekutakura-kure-kure kutakura mhiri kwemakungwa. Magetsi scooter ave ari anotengesa zvakanyanya chigadzirwa kuAmazon muUnited States, nepo iwo ...Verenga zvimwe »
Zvinotora nguva yakareba sei kutumira magetsi-mabhasikoro uye scooter kubva kuChina kuenda kuUnited States？
Zvinonzi 2021 rinenge riri rima gore kune vanotengesa muganho e-commerce vatengesi, uye Amazon USA yakarambidza 3,000 Maakaundi evatengesi veChinese mumwedzi mishoma chete. Chikonzero chakakosha ndechekuti kune zvisiri pamutemo kutaura mashandiro pane aya maakaundi. Kuzviisa zvakapusa, aya maChinese mutengesi maakaunzi brashi ...Verenga zvimwe »
Maitiro ekutumira kunze kwe lithiamu bhatiri zvigadzirwa kubva kuYantian Port yeSenzhen kuenda kuUnited States
Post nguva: Sep-14-2021
Munguva pfupi yapfuura, nyaya yenyaya yekuti kutakurwa kwegungwa kwakawedzera ne gumi uye hapana mudziyo wekutaura wakarova kutsva kutsva. Panguva iyoyo, iyo diki edition ye YiXing Global Logistics yaifara: veruzhinji vakapedzisira vaona mamiriro akasiririsa ekuti kutakura kwegungwa redu rekutengeserana kunze kwenyika kwakakwirira uye ...Verenga zvimwe »
Magetsi Bhasikoro LCL Kubva kuChina kuenda kuUnited States neDhiviri Yakajeka Suo kune Musuwo Basa
Mukutenga nekutengesa kunze kwenyika kwemuchinjikwa-muganho e-commerce, kuburitswa kwemagetsi zvigadzirwa zvinogadzira chikamu chikuru chemusika. Kunyangwe paine zvinhu zvakawanda zvine njodzi mukufambiswa kwepagungwa kwepasi rose kwema lithiamu mabhatiri, havagone kumisa kutengesa kwavo kwakakwira. Semuyenzaniso, Electric sc ...Verenga zvimwe »
FBA yeUnited States yemari-refu-yekuendesa mari ichawedzera munaGunyana 30
Post nguva: Sep-01-2021
Mumwedzi mishoma yapfuura, takaona kuwanda kwemitengo, mari yeVINE, inishuwarenzi inosungirwa, uye mari yekushambadzira (muEurope). FBA yakareba-kureba mitero yekuendesa (kwete multichannel nzira yekuendesa mari) iri kukwirawo. Iyi inotevera email: Amazon email inozivisa: Kubva 2018, makambani anotora chikamu mu ...Verenga zvimwe »
Kuti igadzirise mutengo wekutakura kwepasi rose kukwira, Ministry of Commerce yatora matanho anoshanda
Mari yekutumira yakakwira zvakapfuura gumi-zvakapetwa kubva pakatanga muna 2020. Pamusoro pezvo, chikamu chechipiri chegore ndiyo mwaka wepamusoro wekutakura, uine kudiwa kwakasimba uye kukwana kukwana kwekufambisa, mitengo yekutakura yepasi rose iri kukwira. Vamwe vatengesi vanoratidza kuti zvichienzaniswa nechero c ...Verenga zvimwe »
Kunyanya kune veChina vatengesi, Amazon yakaburitsa yazvino package package yekutakura!
Post nguva: Aug-16-2021
Saiti yeAmazon yeUS ine chiziviso chitsva: Chiziviso chinoti kutanga kubva Nyamavhuvhu 9, 2021, mapakeji anotumirwa akananga kubva kuChina kuenda kune vatengi anofanirwa kuita zvinotevera zvinotevera: Mapakeji ane kukosha kwakazara uye kutakura zvisingasviki $ 5 anofanirwa kuve anoteedzana chirongwa chekutakura icho chinosanganisira. ..Verenga zvimwe »
Amazon mutengesi account kudzima maitiro
Ndanga ndichitaura nezve nzira yekuvhura shopu kuAmazon. Kana ini ndisingakwanise kuzviita, chii chandingaite kana ndichida kudzima account yemutengesi? Zvino, ngatitaurei zvakanyanyisa nezve maitiro ekudzima iyo Amazon mutengesi account, ndeipi nzira chaiyo, ngatitii imwe neimwe. Amazon highligh ...Verenga zvimwe »
Chii chinofanira amazon vatengesi veFBA kuita kana vagamuchira POA maemail?
Post nguva: Aug-02-2021
Munguva pfupi yapfuura, pandakashanyira maforamu akakodzera eAmazon, ndakaona vazhinji vepamhepo vachibvunza mibvunzo yekukurumidza. Zvichida dambudziko nderekuti zvigadzirwa zvavo zvakatengeswa kuAmazon platform zvakarambidzwa kutengeswa nekuda kwekushanda zvisiri pamutemo, uye mutengesi anofanira kuratidza POA kuti ibudirire kunyorera kudzoreredzwa.Vazhinji vanotengesa ...Verenga zvimwe »
Maitiro ekuita neFBA mudziyo weMarine makemikari?
Seyenyika yekutakura zvinhu, isu tinofanirwa kutaura nezve zvakajairika nezve chemakemikari kutengesa kunze kwenyika negungwa. Nderupi ruzivo rwunodiwa kuti utengese makemikari (ane ngozi)? FCL: usati wabhuka nzvimbo, zvinyorwa zviviri zvataurwa pamusoro zvinofanirwa kuunzwa kunyorera uye kubvumidzwa nemuridzi wengarava. Inowanzo tak ...Verenga zvimwe »
Ndeapi maclippers kunze kweMatson neZIM Clippers? Ndeupi musiyano uripo pakati pechinotsikisa uye chakazara chikepe?
Post nguva: Jul-27-2021
Isu tese tinoziva kuti clipper ngarava, clipper ngarava ine zvakanakira nguva yekutsanya, ipfupi yekudzoreredza kutenderera uye zvichingodaro. Mumakore maviri apfuura, simba rekufambisa repasirese harina kukwana, madoko mazhinji anononoka kuzara, kushomeka kwemidziyo uye mamwe mamiriro ezvinhu, vatengesi vazhinji havazodi ...Verenga zvimwe »
Pachave nekutengesa kana iwe ukatumira FBA?
Post nguva: Jul-19-2021
Iko kune kazhinji vatengesi veAmazon vanobvunza kuti: Ini ndakaburitsa FBA, wadii kutengesa, uchifunga kuti haina kunaka sezvinhu zvekungoita zvisati zvaitika, usinganzwisise kuti nei? Kana zvasvika pakushanda chaiko kweAmazon, chinhu chekutanga kuve nechokwadi ndechekuti kuvhiya chirongwa chema-level-level, kusanganisira akawanda element ...Verenga zvimwe »
Inzwa wakasununguka kuti utaure nesu. Isu takagara takagadzirira kukubatsira.
Kero: 4 Houjie Xihuan Road, GangKou Avenue, DongGuan, China
Ko yemagetsi sikuta lithium bhatiri exp ...
Zvinotora nguva yakareba sei kutumira magetsi-bi ...
Maitiro ekutumira kunze kwe lithiamu bat ...
© Copyright - 2006-2021: All Rights Reserved.